के हो नेविसंघको विवाद ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
के हो नेविसंघको विवाद ?
मंसिर २, २०७५ आइतबार १२:४५:५७ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाडौं - नेपाल विद्यार्थी संघको विवाद मिलाउन माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसको बैठक आज पनि बस्दै छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघको विधान अनुसार गएको साउनमै महाधिवेशन सक्नु पथ्र्यो । तर त्यो मिति टरेको ४ महिना बित्न लागिसकेको छ । अझैसम्म पनि संघको महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
संघका सभापति नैनसिंह महर नेतृत्वको दुई वर्षे कार्यकाल भदौमा नै सकिएको भए पनि महाधिवेशन गर्न तीन महिनाको समय थप गरिएको थियो । तर थप गरिएको तीन महिनामा पनि महाधिवेशन गर्न महर नेतृत्वको समितिले नसकेपछि संघ भंग गर्ने कि यही नेतृत्वलाई फेरि समय थपेर महाधिवेशन गर्न दिने भन्ने विषयले विवाद निम्त्याएको हो ।
पछिल्लो पटक कात्तिक १६ गतेदेखि काठमाडौंमा १२ औं महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । तर संघको संशोधन गर्न लागिएको विधानमा ३२ वर्षे उमेर हदमा विवाद बढेपछि महाधिवेशन स्थगित हुन पुग्यो ।
केन्द्रीय समितिबाट संस्थापन पक्षले बहुमतका आधारमा उमेर हद ३२ वर्ष हुने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । उमेर हद हटाउनुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ ।
२०७३ मा सम्पन्न ११ औं महाधिवेशनले नै १२ औँ महाधिवेशनबाट ३२ वर्षे उमेरहद लाग्ने विधानमै स्वीकृत गराएको थियो । ३२ वर्षे उमेर हद नेविसंघको दीर्घकालीन हितका लागि अनिवार्य र उपयुक्त रहेकाले ११ औँ महाधिवेशनले पारित गरेको थियो ।
अहिले पनि नेविसंघको नेतृत्व प्रौढ उमेरमा प्रवेश गरेकाहरुकै हातमा छ । अब भने ३२ वर्ष भित्रका युवालाई नेविसंघको नेतृत्व सुम्पने गरी ११ औँ महाधिवेसनले नै विधान पारित गरेको वर्तमान अध्यक्ष महर सम्झनुहुन्छ । वर्तमान अध्यक्ष महर स्वयं ४० पार गरिसक्नुभएको छ ।
विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व युवामा नै रहनुपर्नेमा कांग्रेसका सबै नेताहरु सहमत छन् । तर उमेर हदका कारण आफ्ना मान्छे पाखा लाग्ने देखेपछि उमेर हद राख्न नहुने भन्दै पौडेल पक्षधर विरोधमा उत्रिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको शनिबार हुने भनिएको बैठक पनि उमेर हद विवादकै कारण बस्न नसकेपछि सोमबारका लागि सरेको हो । सोमबार बस्ने बैठकले महाधिवेशन गर्न यही नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने वा यसलाई भंग गरेर अर्को तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा निर्णय गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
सभापति शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पुरानै कार्यसमितिलाई म्याद थपेर महाधिवेशन गराउने पक्षमा छ । तर रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने विधानअनुसार वर्तमान कार्यसमिति भंग गरेर तदर्थसमिति गठन गरी तदर्थ समितिलाई निर्वाचन गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने पक्षमा छ ।
सोमबारको बैठकबाट कुनै एक निर्णय गर्नै पर्ने बाध्यता छ । अध्यक्ष महर नेतृत्वको संघको थपिएको समयावधि आजैदेखि सकिने भएकाले आज अर्को निर्णय गर्नै पर्ने बाध्यतामा कांग्रेस रहेको हो ।